Wasiirkii Qorsheynta Puntland oo Xilkii ku wareejiyay Wasiiru dowle, +Maqal – SBC
Wasiirkii Qorsheynta Puntland oo Xilkii ku wareejiyay Wasiiru dowle, +Maqal
Wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga Puntland madane Daa,uud Maxamed Cumar ayaa saaka xilkii wasaaradaasi si rasmiya u wareejeiyey ka dib markii madaxweynaha Puntland uu aqbaley in Daa,uud Maxamed Cumar uu ka mid noqdo Dawladda Fadraalka Soomaaliya.
Munaasabadda uu xilka ku wareejinayey Daa,uud Maxamed Cumar ayaa waxaa ka soo qeyb galey Goloyaasha Dawladda iyo Hey,adaha Qaramada Midoobey ee fadhigoodu yahey garoowe ,shaqaalaha wasaarada Qorsheynta iyo marti sharaf kale.
Daa,uud Maxamed Cumar ayaa sheegey in uu ku faraxsanyahey in uu xilka uu u hayey Puntland ku wareejiyo meel fagaare ah waxaanu sheegey in uu rajeynayo in uu ka mid noqdo hawl-wadeenadda dawladda Fadaraalka Soomaaliya,inkastoo aan la sheegin shaqadda uu ka qaban doono Fadaraalaka .
Daa,uud Maxamed Cumar ayaa xilka shaqan hayey mudo dhan sadex sano iyo2bilood,waxaanu xilka wasaaradaasi ku wareejiyey wariirul Dawlaha wasaarada qorsheynta Puntland Sayid Maxamed Cabdulle Xasan.
Dhageyso Warbixin ku saabsan Warkan Wariye Samiiro C/raxmaanwarka xilwarejinta wasirka qorshayanta